Cabashooyin ay BBC kala kulmayso baahintii badnayd ee ay siisay geerida Amiir Philip - BBC News Somali
BBC-da ayaa heshay cabashooyin ku saabsan xaddiga tabineed ee telefishanku uu siisay dhimashadii Amiir Philip.
Idaacadaha ayaa joojiyay jadwalkii qorshaysnaa ee ka bixi lahaa gaar ahaan BBC One iyo BBC Two si ay u sii daayaan tabin gaar ah, ka dib markii uu Amiirku ku dhintay qasriga Windsor jimcihii, isagoo jira 99.
BBC-da ayaa markii dambe ku soo daabacday bogeeda foom u heellan cabashada dadka, si ay ugu oggolaato daawadayaasha inay ka cawdaan tabinta TV-ga.
BBC-da ayaa diiday inay ka hadasho tirada cabashooyinka ay ka heshay tabinta wararkaas.
Warbixin hore, waxay ku sheegtay inay jiri doonaan "warar gaar ah oo laga helayo dhammaan shabakadaha BBC-da si loo xuso noloshiisa howlaha bulshada ee aan caadiga ahayn", iyadoo jadwalka qorshaysan la hakiyay.
BBC Radio 4 iyo Radio 5 Live ayaa sida oo kale waxay sii daayeen barnaamijyo gaar ah oo lagaga sheekaynayo nolosha Amiir Philip, halka BBC Four ay hakad gashay oo ay soo bandhigtay farriin faraysa daawadayaasha inay u wareegaan "warbixin weyn oo war ah".
Sababtoo ah wararkii isdaba-joogga ahaa ee jimcaha, finalka Masterchef, oo ay ahayd in la sii daayo 20:30 BST ee BBC One, lama sii deyn.
BBC-da ayaa sameysay foom u gaar ah boggeeda internet-ka kadib cabashooyinka laga qabo tabinta wararka.
Foomka ayay ku sheegtay inay heshay "cabashooyinka ku saabsan tebinta TV-ga oo aad u badan" ee ku saabsan geerida Amiirka, waxayna ku boorisay daawadayaasha inay soo galaan cinwaankooda email ahaanta ah si ay u diiwaan geliyaan cabashada ay qabaan.
Waxay sida oo kale isbeddel lagu sameeyey jadwalkii Sabtidii, waxaaana lagu beddelay barnaamij khaas ah oo BBC News ka baxayey kuna saabsanaa Amiirka.
BBC-da ma ahayn idaacadda kaliya ee wax ka bedeshay jadwalka ka dib wararka, iyada oo ITV ay hagaajisay barnaamijyadeeda si ay ugu hoggaamiso barnaamijka la dheereeyay ee News At Ten 22:00.
Dhanka kale, Chanel 4 ayaa sii daayey barnaamij tacsiyeysan 16:00, waxaa ku xigay 90 daqiiqo oo gaar ah 19:00 ka hor inta uusan kusoo laaban jadwalka ugu sareeyay.
Amiir Philip: Madaxweynayaasha nool ee Mareykanka oo qaddarin u muujiyey